FAMPIOFANANA OMEN’NY CENI : Mifantoka amin’ny fampanarahan-dalàna an’ireo mpikirakira fifidianana
Ao anatin’ny fanomezana fiofanana ireo hiandraikitra ny birao fandatsaham-bato sy ireo mpisehatra rehetra amin’ny fampandehanana ny fifidianana solombavambahoaka izay hotanterahina ny 27 mey ho avy izao ny Céni. 10 avril 2019
Araka ny fanazavana noentin’ny filoha lefitr’ity vaomiera manokana misahana ny fifidianana ity dia anisany tanjona ao anatin’izao fampiofanana izao ny fampanarahan-dalàna ireo rehetra mikirakira ny fifidianana. “Fiofanana sy fifanankalozan-kevitra izay iarahan’ny Céni sy ny rantsa-mangaikany ary ny avy eo anivon’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana. Mahakasika ny fifidianana solombavambahoaka indrindra izany fiofanana izany mba hampitoviana ny famakiana sy ny fahazoana ireo voalazan’ny lalàna mahakasika izay fifidianana solombavambahoaka izay”, hoy ny fanazavana noentin’ny filoha lefitry ny Céni, Thierry Rakotonarivo.
Tafiditra ao anatin’izany ny fikirakirana ny voka-pifidianana mba hifanaraka amin’izay voalazan’ny lalàna, manomboka eny amin’ny birao fandatsaham-bato mandalo amin’ny Céni foibe ary mifarana eny amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana. Ankoatr’izay, anisany nodinihina tao anatin’ity fiofanana ity ihany koa ny mahakasika ny fifanolanana miseho eo amin’ny lafiny ara-pifidianana.
Misahana andraikitra telo lehibe
Araka ny fanazavana voaray hatrany dia mizara telo lehibe sady miavaka tsara ny andraikitry ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana (Hcc) mandritra ny zotram-pifidianana solombavambahoaka. Anisan’ny sahanin’izy ireo amin’izany ny fijerena sy ny fanaraha-maso ny famoahana ny voka-pifidianana, ny fitsinjarana ny toerana ho an’ireo solombavambahoaka ary ny fanotana ny boky kely izay tanterahin’ny Hcc. Ity farany no ahafahana mamaritra ny fomba fanaovana fitoriana raha toa ka misy izany ho an’ity fifidianana ity.
Ao anatin’ny fanatanterahana ny fampielezan-kevitra dia manana andraikitra lehibe ihany koa ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana. Izy ireo no mifehy, amin’ny alalan’izay voalazan’ny lalàna ny fitsipika tokony arahin’ireo kandidà. Marihina fa mety ho tonga hatrany amin’ny fanafoanana ny maha kandidà ny mpilatsa-kofidiana iray ny fandikan-dalàna ataony mandritra ny fe-potoana hanatanterahana ny fampielezan-kevitra. Antony roa kosa raha ny fantatra no mety mahatonga ny fanafoanana ny voka-pifidianana ka anisan’izany ny fisiana hala-bato.